> Resource> Utility> otú ndozi NTFS.sys efu ma ọ bụ merụọ Njehie
NTFS.sys efu ma ọ bụ NTFS.sys emerụ njehie
Nsogbu a mere mgbe m na-wụnye Service Pack 2 ma ọ froze, otú ahụ ka m reboot wee njehie na-agwa m: Windows nwere ike na-amalite n'ihi ndị na-esonụ faịlụ na-efu ma ọ bụ ihe rụrụ arụ: System32DriversNtfs.sys Ị nwere ike na-agbali ịrụzi a faịlụ site na-amalite Windows Mbido na iji mbụ Mbido CD-ROM. Họrọ 'R' ke akpa ihuenyo na-amalite idozi
N'ihi ya, m soro ndị nkuzi dị ka m kwuru ná mmalite. M na-agba ọsọ na site na ya niile, ma e wezụga na njedebe na "kwụsị" iwu adịghị arụ ọrụ, na CD-Rom adịghị idaputa. N'ihi ya, m na-eji "ụzọ ọpụpụ" na iwepụ ụda CD-Rom mgbe m reboot. Mgbe ahụ ọ na-aga azụ otu nzuzu ihuenyo banyere amalite windows. Biko enwere a ụzọ idozi nke a na-enweghị nhicha m ike mbanye na reinstalling windows? M mere na 2 ụbọchị gara aga n'ihi na a na mberede messing elu buut faịlụ.
ENYEMAKA Lé !!
Ọ bụrụ na ndị NTFS.sys faịlụ na-efu ma ọ bụ merụọ, kọmputa gị ga-ezute ihe NTFS.sys-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo njehie, na a na-eme na-emekarị. N'ihi ya, ịmara otú idozi NTFS.sys-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo njehie na-aghọ ihe dị mkpa.
Otú ndozi NTFS.sys-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo njehie?
Ọ bụrụ na ụzọ n'elu adịghị arụ ọrụ, ị na-azọrọ na e nweta enyemaka site na NTFS.sys njehie fixer. A ga-nza nke ngwaọrụ na nwere ike ime enyemaka. N'ebe a, anyị nwere ike ikwu iji Wondershare LiveBoot, n'ihi na a usoro bụ nnọọ mfe iji, naanị ihe anyị kwesịrị ime ọtụtụ clicks. Na LiveBoot enye CD, DVD na USB mbanye na buut elu kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Fanye CD, DVD ma ọ bụ USB mbanye nke LiveBoot, na-amalite na kọmputa gị. Nzọụkwụ 2. Malite kọmputa gị site na ị na-ahọrọ "buut si LiveBoot" na buut NchNhr. Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ, pịa "Windows Iweghachite" taabụ n'elu na kụrụ "buut Files Iweghachite" menu na ekpe.
Nzọụkwụ 4. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu Windows na diski ike gị, họrọ lekwasịrị na onye na-amalite ịgụ isiokwu ọrụ. Ọ bụrụ na e nwere nanị otu, ị nwere ike ileghara ya anya. Nzọụkwụ 5. Mgbe ahụ, pịa ịrụzi gị Windows.
Ọ bụ ya. Bilie gị CD, DVD ma ọ bụ USB ụgbọala azụ, na ị ga-ahụ na Windows bụ azụ nkịtị mgbe ahụ.
Ịmatakwu banyere Wondershare LiveBoot buut CD
Olee otú Idozi ma ọ bụ Wepụ Njehie Loading NvCpl.dll
Olee otú Idozi Njehie na Loading wdg na mmalite
Olee otú Idozi Boot.ini Ne
Yahoo Paswọdu Finder: Olee otú Chọta Yahoo ozi / Mail Paswọdu
Olee otú Idozi Ntoskrnl.exe efu njehie
Olee otú Idozi Asambodo Error na Internet Explorer 8